Cumar Cabdirashiid oo dharbaaxo lama filaan ah kala kulmay RW ee Xasan Cali Kheyre - Caasimada Online
Home Warar Cumar Cabdirashiid oo dharbaaxo lama filaan ah kala kulmay RW ee Xasan...
Cumar Cabdirashiid oo dharbaaxo lama filaan ah kala kulmay RW ee Xasan Cali Kheyre
Muqdisho (Caasimada Online)- Waxaa dhawaan xafiiska Ra’isulwasaaraha lagala wareegay Cumar Cabdirashiid oo ahaa wasiirkii koowaad ee xukuumadii waqtigeeda dhamaaday kadib markii ay wadanka ka dhalatay dowlad cusub.
Haddaba Cumar Cabdirashiid oo waji furfurnaansho ka muuqatay markii uu xilka wareejinayey ayaa isku dayey inuu Kheyre ka dhaadhacsiiyo arrin ku saabsaneyd wasiirada cusub.
Cumar ayaa kheyre ka codsaday inuu wasiirada cusub ugu daro shaqsiyaad uu isaga doonayo inay halkaas kasoo muuqdaan balse midaas waxaa jawaab kulul ka bixiyey Ra’isulwasaare Kheyre.
Hadalka kasoo yeeray Kheyre ee uu u sheegay Cumar ayaa aheyd inaysan go’aan ka qaaday karin shaqsiyaadka kusoo biirayo wasiirada cusub cid aan aheyn Farmaajo iyo Isaga wuxuuna Cumar u sheegay inuu raali ahaado waqtigiisa uu halkaas kusoo dhamaaday.
Xogta aan heleyno ayaa sheegeyso inuu Cumar Cabdirashiid watay ilaa 2 shaqsi oo uu doonayey inay kasoo dhex muuqdaan wasiirada cusub balse midaas uma suurta gelin waxaase ku dhacday dharbaaxo kulul oo lama filaan ku noqotay.
Cumar ayaa waxaa ka muqatay kalsooni aad u badan markii uu liiska ay ku qornaayeen labadaan shaqsi u geenayey Xasan Cali Kheyre balse wuxuu arkay arrin ka duwan wixii uu filayey markii loo sheegay inaan shaqsiyaadkaas lagu dari karin golaha wasiirada.
Ugu dambeyntii Cumar oo ay ka muuqato murugo iyo qanacsanaan la’aan ayaa kasoo tagay xafiiska Kheyre, diidamadaan ayaana kusoo aadeyso xilli dhawaan warbixino lasoo saaray ay sheegayeen inuu 35 Malyan oo Dollar ka qaatay Imaaraadka isagoo saxiixay heshiiskii Berbera.